‘Mikapoaka Ahy Amin’ny Tariby Elektrika Isan’Andro ry Zareo…Adonan-dry Zareo Amin’ny Rindrina ny Lohako’ · Global Voices teny Malagasy
Mitantara ny fampijaliana nihatra taminy tany Libanona ny mpiasa an-trano teratany Ethiopiana iray
Voadika ny 02 Avrily 2018 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, русский, Português, Français, Ελληνικά, English
Lensa (ankavia) Miaraka amin'i nenitoa Ganneth (ankavanana). Saripika nozarain'ny naman'i Lensa ao amin'ny media sosialy ary nahazoana alalana.
Raha nikasa ny handositra ny tranon'ny mpampiasa azy ireo i Lensa Lelisa Tufa, 21 taona sy ny of yet unidentified) Ethiopiana mpiasa an-trano iray (mbola tsy fantatra ny momba azy) tamin'ny 11 marsa 2018, dia tsy mahita hevitra afa-tsy ny mitsambikina avy eny amin'ny lavarangana eny amin'ny rihana faharoa ry zareo.
Saingy i Lensa irery no nitsambikina. Tsy nanao izany ilay vehivavy iray, fa natahotra ny haratra rehefa nahita ny nanjo an'i Lensa.
Rehefa nampidirina tany amin'ny hopitaly noho ny fahatapahan'ny tongony roa i Lensa, dia nandrakitra lahatsary naharitra dimy minitra niaraka tamin'ny nenitoany Ganeth manazava ny toe-draharaha.
Navoaka tao amin'ny pejy “This is Lebanon“, izay mifantoka amin'ireo fihoaram-pahefana mianjady amin'ny mpiasa an-trano ao Libanona, tamin'ny 26 marsa ny lahatsary avy eo, tamin'ny teny Amharika izany fa nasiana dikan-dahatsoratra tamin'ny teny anglisy. Tamin'ny fotoana nanoratana (ny teny anglisy) dia efa ho 100.000 ny isan'ny olona nijery ilay lahatsary.
Ao amin'ny lahatsary isika maheny miteny azy fa:
[…] Nanao izay tiany nataony tamiko hatramin'ny voalohany indrindra ry zareo […] Nampijalian-dry zareo aho ary tsy afaka nanao na inona na inona hanavotana ahy. Mikapoka ahy amin'ny mahazaka elektrika isan'andro ry zareo ary sintonin'ny tanany amin'ny voloko aho ka taritarisiny manerana ny efitrano. Akapoky ry zareo amin'ny rindrina ny lohako. […] Efatra amin-dry zareo no mampijaly anay. […] Mifandimby ry zareo mampijaly anay. […] Tsindroniny amin'ny rantsan-tanany ny masoko. […] Miteny amin'ny tenako aho, ‘Mandra-pahoviana no hahazakako izany?’ […] Misy zazavavy Ethiopiana hafa miaraka amiko ary mihatra aminy koa izany toe-javatra izany. Nanapa-kevitra ny hitsambikina avy eo an-davarangana niaraka tamiko izy.
Navoaka avy eo fa mitantana orinasan-damaody avo lenta antsoina hoe Eleanore Couture ireo mpampiasa azy.
Ho setrin'izany, “This is Lebanon” nanomana fihetsiketseham-panoherana izay natrehin'ny mpikatroka eo ho eo amin'ny 40 teo anoloan'ny orinasa tao Jdeideh, any amin'ny faritra avaratra amin'ny tanàna itatr'i Beirota, ny fikambanana “This is Lebanon”.
Raha tsy navela hitsidika azy tany amin'ny hopitaly ny nenitoany Ganeth tamin'ny voalohany dia navela ihany izy avy eo noho ny fanerena avy ao amin'ny media sosialy, araka ny nolazain'ny Libaney mpanao gazety Anne-Marie El Hage manoratra ao amin'ny gazety mivoaka isan'andro amin'ny teny frantsay L'Orient Le Jour.
Iray amin'ireo mpiasa an-trano mpifindra monina maro ao Libanona terena hiasa sy hiaina zava-tsarotra araka ny rafitra “kafala” (midika hoe “fanohanana ara-bola” i Lensa.
Iray amin'ireo olona maro namoaka ny sarin'ny tenany amin'ny soratra #IAmLensa ho fanohanana ilay Ethiopiana mpiasa Lensa Lelisa ao Libanona. Loharano: This is Lebanon. Nahazoana alalana.
Araka ny nohazavain'ny fifandaminana mpanandra-teny Migrant-Rights.org, ny rafitra no mahatonga ireo mpiasa ireo ho marefo eo anatrehan'ny fihoaram-pahefana:
Mpanao fihetsiketsehana iray mitazona sora-baventy eo ambanin'ny mariky ny fivarotana “Eleanore”. Toy izao ny fivakin'ny soratra: “ravao ny rafitra Kafala!”. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Rafitra fanahara-maso ny kafala. Eo amin'ny sehatry ny fifindra-monina, io no lalana ahafahan'ny governemanta manome fahefana ireo olom-pirenena na orinasa tsy miankina hanara-maso sy hiandraikitra ireo mpifindra-monina. Omen'ny rafitra fahafahana araka ny lalàna ireo mpanohana ara-bola hifehy ny mpiasa: tsy afa-miova asa, mandao asa, na mandao ny firenena tsy mahazo alalana avy amin'ny mpampiasa ny mpiasa. Raha mandao ny asa iray tsy nisy fierana ny mpiasa iray dia manana fahefana hanafoana ny visa ahafahany monina ao an-toerana ny mpampiasa, ka mahatonga avy hatrany ilay mpiasa ho tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena. Tsy maintsy mandao ny firenena amin'ny alalan'ny fombafombam-pandroahana (fampodiana) ireo mpiasa nofoanan'ny mpampiasa azy ny visa ahafahany monina ao an-toerana, ary maro no tsy maintsy mandalo fonja.
Mamerimberina hatrany ny famaranana ny rafitra kafala sy ny fankatoavana an-tsonia ny dina 189 an'ny Fifandaminana Iraisampirenena Misahana ny Asa, izay miantoka ny fampanajana ny zon'olombelona ho an'ny mpiasa an-trano rehetra ireo mpifindramonina miasa an-trano ao Libanona.
Araka ny antontanisa avy amin'ny sampam-pitsikilovan'i Libanona izay azony avy amin'ny IRIN sampan-draharaha mpanadihady sy miompana amin'ny vaovao misahana ny maha-olombelona, dia misy mpifindramonina mpiasa an-trano ao amin'ny firenena roa maty isan-kerinandro.
Vakio: ‘We Are Not Slaves, We Want Our Rights': Lebanon's Migrant Domestic Workers March on Labour Day
Tsy mahagaga, te-hiova mpampiasa i Lensa, saingy nandrahona azy nandrahona azy hampody any Ethiopia ny zanakavavin'ireto mpampiasa raha mitady hanao izany izy. The exchange Notsongain'i El Hage ny fifanakalozan-dresaka :
“Raha afa-mandeha indray aho rehefa sitrana, dia te-hiova mpampiasa ary hiasa eto Libanona.” Namaly bontana ny zanaky ny mpampiasa azy: “Vonona ahy ny hampody azy any aminy, raha izany.”
Ary araka ny nohazavain'i El Hage, efa maro ireo fikasana hanarona ity raharaha ity:
Ho fanaovana izany, tsy maintsy misy ny masobe tsy mahita an'ny rehetra, ny avy ao amin'ny hopitaly, ny mpitsabo mpanamarina ny zavamisy, ny birao fandraisana mpiasa izay ny anarana sy ny adiresin'ny ethiopiana vavy iray ihany no aty aminay ny mombamomba azy, ny avy amin'ny ambasadin'i Ethiopia ihany koa, izay namela ilay tanoravavy ho eo ampelatanan'ireo mpampiasa mpihoa-pahefana, ary manakimpy ny maso amin'ny loza izay mbola mihatra aminy amin'izao fotoana.
Na i Lensa aza tsy maintsy nitsipaka ny fitsambikinana teo anatrehan'ny mpampiasa azy:
Nandray naoty ny fijoroany vavolombelona fotsiny ry zareo, teo anatrehan'ny mpampiasa azy izay hita mihitsy fa nibaiko izay tokony holazainy: “Nibolisatra aho raha nananton-damba” sy ny “Tsy mila fanampiana aho”. Eny fa na dia ny dokotera mpanamarina ny zavamisy aza dia nanamarina fa tsy nisy ny fahamanganana, nefa dia asehon'ny sary ilay zazavavy maratra mafy, feno mangamangana.
Ankoatra ny famerenan'ny hopitaly azy tany amin'ireo mpampiasa mihoa-pahefana, dia nomen'ny dokotera fialan-tsasatra iray volana su tapany i Lensa.